တီတီခိုင် – Hlataw.com
မင်း က လဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ကမထတော့ဘူး ကျောင်း မသွားသေးဘူးလား သွားမှာ ပါ ဗျာ ဘာလုပ်မလို့လဲ မင်းအမေ ကော ဈေးသွားတယ် အန်တီခိုင် အေး အေး မနက်ကတည်းကမမြင်လို့ပါ ကဲ ကဲ သွားပြီ မောင်စော်…. ရေ ဟုတ် ..ကဲ့ … အန်တီ အန်တီခိုင် ဆိုတာ အသက်လေးဆယ်ငါး …အရွယ် အမေ ရဲ့ ညီမ အရင်းအငယ်ဆုံး အမေက အကြီးဆုံး အန်တီက တရားဓမ္မ နှင့်ပျော်မွေ့တာများသည် ခတ်မှီပေမယ့် ဘုရားတရားမြဲသည် သူယောင်္ကျားက မြို့ထဲတွင် ကွန်ပြူနဲ့ပက်သက်သော ပစ္စည်း များလက်ကားပေးသောဆိုင်ဖွင့်ထားသည် တည်းခိုခန်းများ …အဝေးပြေးကားများ ..ထောင်ထားသည် လုပ်ငန်းများသည် …ကိုယ်ပိုင်ခြံနှင့်တိုက်နှင့်ရှိသော်လည်း သားသမီးတွေက အိမ်ထောင်ကျပြီး သူဟာသူ ခွဲနေကြသဖြင့် ….လူရင်းလဲမရှိသောကြောင့် ကျနော်တို့နှင့်ကပ်လျှပ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်တိုက်ခန်းတွင်သာနေသည် …. ကျနော်အသက်က 20 အဖေ က ဂျပန်တွင်အနေများပြီး ခဏတဖြူတ်သာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာတက်သည် အမေနဲ့အတူ နှစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်သည်။ အကိုအကြီး က ချမ်းသာ သူက ဩစတေးလျှ တွင် ကျောင်းတက်နေသည် အကိုကိုဒီမှာထားလို့မဖြစ် ချမ်းသာသည် ရည်းစားအလွန်များသည် မိန်းမအထာလဲအလွန်ကျွမ်းသည် သူသယ်ရင်းတွေဖြစ်သော လူယုတ်မှာ(ယုတ်ယုတ်)တို့ … ကိုဗမ် တို့ … တစ်ကယ်ကို မိန်းမကျမ်းကျေသူတွေပင် သူတို့ကတော့ ကျနော်နဲ့အလွန်ရင်းနှီးပြီးသူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းကြသည်။ ကျနော် က ငယ်သေးလို့လားမသိ မိန်းမတွေရဲ့အထာ ကိုချမ်းသာလို့နော မကျေ….ကျနော်အားလျှင် ကွန်ပြူတာနှင့်သာ အချိန်ကုန်တက်သည် …… တီခိုင်တို့ လင်မယားတွင် သမိး နှစ်ယောက်ရှိသည်။ သမီးအကြီးဆုံးကကျနော်အစ်မဝမ်းကွဲ ““မပပ””(ပပဝတီ)က ဒေါက်တာ ဓနု နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီး….ရန်ကုန် လှည်းတန်းဘက်တွင်.
သက်သက်ခွဲနေသည် ။ သမီးလတ်က ဘုံဘုံ ….. (ဂျမ်းဘုံ) သူလဲ စစ်ဗိုလ်ကိုမျိုးမင်း နှင့်အိမ်ထောင်ကျကာ မန်းလေးတွင်နေသည် … ကိုမျိုးမင်းသည် စစ်ဗိုလ် ဖြစ်ပေမယ့် ဓတ်ပုံရိုက် အလွန်ဝါသနာပါသူဖြစ်သည် … တာဝန်ချိန်မှ အပ အားလပ်လျှင် ကင်မရာတစ်လုံးဖြင့် တစ်မြို့လုံး ကင်မရာဖြင့်လိုက်ရိုက်သည် ဓတ်ပုံ အလှပြိုင်ပွဲများတွင် ဓတ်ပုံဆု ရရှိထားသူဖြစ်သည် ….. နီးရာဆွေမျိုးအရင်းအခြာရယ်လို့ မရှိတော့ တီခိုင်တို့မိသားစု ကိုပင်ခင်တွယ်စရာရှိသည် ….. တီခိုင် ယောင်္ကျား ဦးမြင့်က အလွန်အေးသည် အလုပ်ကြိုးစားသည် ….အသောက်အစားကင်းသည်။ မနက်ဆို ဆိုင်သွား ..ညနေဘက်မှပြန်လာသည် တစ်ခါတရံ အလုပ်များလျှင် ညနက်မှပြန်လာတက်သည်။ ဒီတော့တီခိုင်မှာ အများအားဖြင့် ပျင်းလျှင် ကျနော်တို့ဘက်လာပြီး အမေနဲ့ စကားပြောသည် တရားကြောင်းပြောမည် သူတိုက်ခန်းတွင်ထမင်းဟင်းချက်ပြူတ်ပြီး အလုပ်မရှိလျှင် တစ်နေ့ကုန် TV ကြည့် ချင်ကြည့်မကြည့်လျှင် သိုးမွှေး ထိုးနေတာများသည် …. တီခိုင် သည် အလွန်လှသည် အမေ က အသားညို သည် တီခိုင်က ဖြူသည် အရပ်က သိပ်မရှည် 5ပေ 4လက်မလောက် သာရှိသည် အရပ်ပုသည်ဟုတော့ပြောမရပါ ..အနီးဆုံးခန့်မှန်းရုပ်ကိုပြောရလျှင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော် လိုရုပ်မျိုး တီခိုင် ၏ သည် အလွန်အရှက်အကြောက်ကြီးပြီး မာန လဲအလွန်ကြီးသည် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လဲ အသွားအလာနည်းသည် ကိစ္စမရှိလျှင် ဘယ်အိမ်ကိုမှမသွားတက် ..အိမ်ထဲမှာသာ အနေများသည် ……. အမေ က တဈေးခြင်းကိုချပြီး …. ““ဟဲ့ သား မင်းကျောင်းနောက်ကျဦးမယ် သွားတော့မှာ အမေ ညမင်းသားဆိုဒ် တွင် မြန်မာမလေးများ၏နောက်ပိုင်းအလှ ကကြည့်ကောင်းနေပေမယ့်ုကြည့်နေလက်စကို ပိတ်လိုက်ပြီး Log out လုပ်ပြီး ကွန်ပြူတာကို Shutdown လုပ်ကာ ကားသော့ယူပြီးလှည့်အထွက် အမေက မင်းကျောင်းသွားရင် မိုးကာအင်္ကျီလေးဘာလေးယူသွားဦး မိုးတွေကမဲနေတယ် ….. ဟုတ်ဟုပြောပြိး တစ်ကယ်တမ်းတော့ယူမလာခဲ့ မယူချင်ပါ မိုးရွာတာလဲမဟုတ်ဟုကိုယ်ဘာသာကိုယ်တွေးပြီး လှေကားကနေဆင်းလာခဲ့သည် ပထမထပ်တွင် မပပဝတီတို့လင်မယားနှင့်တွေ့သည် ဟဲ့ ငစော် ဘယ်လဲကျောင်းသွားတော့မလို့လား ..ဟုတ် မ ပပ
စောစောစီးစီးပါလား ဗ် … “အေး ငစော်ရေ …. ဈေးသွားရင်းအပြန်လှည့်ဝင်လာလိုက်တာ ကဲ ကဲ အမေ ဆီသွားလိုက်ဥိးမယ် မင်းလဲကျောင်းသွားမှာမလား .. ဟုတ် သွားမယ် မမ အကိုဓနု သွားမယ်ဗျာ အေး ငါ့ညီ ..သွားသွား ကိုဓနု ကလဲငါအရှေ့တောင်မရှောင်ဘူး သူမိန်းမဖင်ကို မျက်စိမခွာဘူး ကိုယ်မိန်းမကိုများ အိမ်မှာကြိုက်သလောက်ကြည့်ပေါ့ အပြင်မှာလဲကြည့်တာပဲလားမသိ ပြောသာပြောရတာ မပပဝတီဖင်ကြီးတွေက နည်းတဲ့ဂျော ကြီးတွေ..မဟုတ် ခါးကနည်းနည်းတုတ်သည် ခါးတုတ်တာတောင် ဖင်တွေက ပြောက်မသွား ကားထွက်နေပြီ ကောက်ချိတ်နေပြန်သေးသည် မီးခိုးရောင်ထမီနှင့် တီရှက်အနက်ဝတ်းထားတော့ပို၍ကြည့်ကောင်းနေသေးသည် ..လှေကားကနေတက် သွားတာကိုမသိမသာလှည့်ပြီးခိုးကြည့်လိုက်မိသည်။ ဖင်တွေက လှေကားတစ်ထစ်တက်လိုက် တိုင်း လှုပ်ခါနေပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီအ ရာ ကထင်းနေအောင်ပေါ်သည် ဖင်တွေကတုန်ပြီး လှုပ်လိုက်တိုင်း ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကားထွက်နေတာ ကို က အလွန်ကြည့်ကောင်းသည် ….။ .. ငါ့နှယ် ကိုယ်အစ်မ ဖင်ကိုတောင် အလွတ်မပေးပါလား လို့တွေးမိပြီး ..ပြူံးလိုက်မိသည်…။ မပပ ရဲ့ဖင်တွေကို ခိုး ရိုက်ပြီး မြန်မာမလေးများ ရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကဏ္ဍမှာ တင်လိုက်လို့ကတော့ ဂုဏ်သတင်းနဲ့ Thank you တွေ မနည်းလောက်ဘူးဟု စိတ်ထဲတွင်တွေးမိသည် ကျောင်းအပြန် တွင် ကိုဗမ် စီ ဝင်ပြီး ငါ့ စပိုင်ကင်မ ရာလေးပြန်ယူဦးမှာပဲ ကိုဗမ် က ခဏဟုပြောကာငှားသွားတာ ကြာလှပြီ …ကိုဗမ် ကင်မ ရာ က ယုတ်ယုတ် ငှားသွားပြီ ကျနော်ကင်မ ရာ ကို ကိုဗမ် က ပြန်ငှားသွားတာဖြစ်သည် ကင်မ ရာ ရ လျှင် မ ပပ ၀တီ ရဲ့ ဖင်တွေကို တစ်ကယ်ကို ခိုး ရိုက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည် …. ကိုဓနုသိလျှင် ငါကိုအလွတ်မပေးလောက် … ဟို .ကွာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး ။ခိုး ရိုက်မှာပဲဟာကို…။ ကျောင်းနေ့လည်ပိုင်းတွင်အတန်းချိန် နှစ်ချိန်လွှတ်ကာ စောထွက်လာခဲ့သည် 2နှစ် ရီ ရှိသေးသည် ကားထားပြီး လမ်းလျှောက်ကာ လက်ဖက် ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး ဆော်တွေ ထိုင်ငေးနေသည် …သယ် ရင်းတွေက သူဆော်တွေနဲ့ ချိန်းထားလို့ ဟုဆို သွားနှင့်ပြီ ….ငါလဲဆော်တစ်ဗွေလောက်လုံးမှဖြစ်မယ် ….ကျနော် ရုပ်က ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ရည်သွေးတာ မဟုတ် သ ရုပ်ဆောင် နေမင်း လိုပုံစံမျိုး မျက်ခုံးကောင်းကောင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူ ဘော်ဒီ က ကစားနေကျမလို့ … အလွန်လှသည် …ဇယားခင်းမယ်ဆို သိပ် အချိန်ပေးဖို့မလိုရေ လဲ ရှိတယ် ရုပ်လဲ ရှိတယ် …..ကျောင်းကဆော် ကိုတော့မလုံးချင် သ ရုပ်ဆောင်တွေထဲ က လုံးမလားစဉ်းစားသည် ဥပမာ ..မေသက်ခိုင်ဖြစ်ဖြစ် ….မယ်လိုဒီဆို လဲမဆိုးလှဘူး … လောလောဆယ် လမ်းပေါ်
က ဆော်တွေ ကို ရှိုးလိုက်ဦးမယ် ကျနော်အကျင့်ကအဲဒါပဲ ဆော်လုံးမယ်ဆို စိတ်သာ ရှိတာ လုံး ရမှာ အလွန်ပျင်းသည် ….အင်း ……လုံးတော့လုံးမှာပေါ့ မောင်လေးဘာတွေတွေးနေတာလဲအမ် … သြော် မစိုး ဆိုင်ပိုင် ရှင် မမစိုး ဘာ ရယ်မဟုတ်ပါဘူး အစ်မ ရာ … ကော်ဖီသောက်ချင်လာတာနဲ့ လာသောက် ရင်း သယ် ရင်းတွေလဲမပါတာနဲ့ ဟိုတွေးဒီတွေးပါပဲ .. အံမယ်ဟုတ်လို့လား ငေးငိုင်နေတာကြလှပြီ မမ ကောင်တာကနေလှမ်းကြည့်နေတာ အာ တစ်ကယ်ပါ ဘာမှမတွေး ပါဘူး … ဟုတ်ပါပြီ ..ဟုတ်ပါပြီ ..ကဲ့…ကဲ ငေးလိုက်ဥိး အဲ တွေးလိုက်ဥိး အဟိ မစိုးအပြင်သွားလိုက်ဦးမယ် ဟုတ် ..“ မစိုး .. မစိုးကလဲအသက်သုံးဆယ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် အိမ်ထောင်မကျသေး ဆိုင်ပိုင် ရှင် သမီး တစ်ဦးတည်းသောသမီး ရုပ်ကော ဂျော ကောအလွန်မိုက်ဗျာ .. ပိုက်ဆံရှင်းပြီးထအထွက် … ဝုန်း ကနဲ့ သည်းလာသော မိုး ကြောင့် စိတ်လေသွားသည် ဘယ်လို မှကိုမထင်ထားပါ ….ဆိုင်ထဲပြန်မဝင်ချင်တော့ ကား ရှိရာ ကို လျှောက်လာတော့ လူက စိုရွဲ နေပြီ ဆံပင်တွေကိုအသာလေးသပ်တင်ရင်း အပြေးကလေးလျှောက်လာမိတယ်.. ကားပေါ်တက်ပြီးတစ်ခါတည်း အိမ်ကိုတမ်းမောင်းလာခဲ့သည်။ ကိုဗမ် စီ မသွားဖြစ်လိုက်တော့ ကင်မရာ လဲ မယူလိုက်ရတော့ .။။။နောက်နေ့မှပေါ့လေ ကားထားပြီးလှေကားကနေပြေးတက်လာခဲ့သည် …အခန်းရှေ့အရောက် သွားပြီ အခန်းတံခါးသော့ခတ်ထားတာတွေ့လိုက်ရသည် ..အမေ က နေ့ခင်းဆိုအမြဲ လိုလို သူကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်သော စိန် ပွဲစားအလုပ်ကို လုပ်တက်သည် ဖောက်သည်တွေကိုသွားပြ တာများသည် …ဒီနေ့လည်းအဲဒီသွားသည်ဖြစ်မည် …ဒီနေ့ကျမှ သော့အပိုကိုမထည့်ခဲ့မိ .. အခါတိုင်းသော့အပို ယူလာတက်သည် ..အမေတစ်ချောင်း… ကျနော် တစ်ချောင်း ဆောင်ထားသည် .. ပြောသာပြောရတာ သော့အပိုယူဖို့မေ့ခဲ့သည်ကများသည် တီခိုင်ဘက်ကတံခါးပွင့်လာသည် …. ““ငစော် ”” ဟယ် ..မိုးတွေရွဲလိုပါလား ..ငါလှေကားက တက်လာသံကြားပါတယ်လို့ထင်လို့ဖွင့်ကြည့်တာ မမ က အပြင်သွားတယ် လာ .လာ ..လာ ဒီဘက် လာ ခဲ့ မင်း တော့ ဖျားတော့မှာပဲ ကွာ … တီခိုင် တို့တိုက်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ကို ချ ကာ တဘတ်တစ်ထည်တီခိုင်အခန်းထဲဝင်ယူပြီး ခေါင်းကိုသုတ်န
လိုက်သည် ရော့ .. ရော့ မင်း ဦးလေးအင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးလဲလိုက် ဒီတိုင်းနေရင် ဖျားဦးမယ် …တီခိုင်က ဘာတွေလုပ်နေလို့ ရေတွေရွဲနေရတာလဲ ….. မိုးရေချိုးချင်တာနဲ့ ဘေးဝရန်တာ ထွက်ပြီး မိုးရေချိုးနေတာ အရှေ့ပြတင်းပေါက်လာပိတ်တုန်း ခြေသံကြားလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ မင်းနဲ့တွေ့တာပဲ ကဲ ..ကဲ အဝ တ်စားလဲတော့လေ… တီခိုင်ကတော့….. မိုးေ ရ နည်းနည်းလောက်ထပ်ချိုးချင်သေးတယ်”” ““ဒါဆို ကျနော်လဲချိုးဦးမယ် ဗျာ”” မထူးဘူး စိုလကျစနဲ့ပဲ ဒါဆိုလဲ ချိုး ချိုး ပြီးမှ အဝတ်လဲပေါ့ ဘေးဝရန်တာ ထွက်လာပြိး တီခိုင်နဲ့အတူမိုးရေချိုးနေလိုက်တယ် မိုးကလဲဘာကောင်းသလဲမမေးနဲ့ ဗျာ …စကားသံကိုမနည်းအော်ပြောနေရတယ် တီခိုင်က ဟိုဘက် ထောင့် ကျနော်က ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ မိုးရေချိုးရင်း အင်္ကျီချွတ်လိုက်တယ် …ဂျင်းဘောင်းဘီထဲက ပိုက်ဆံအိတ်ကိုထုတ်ပြီး အခန်းထဲလှမ်းပစ်လိုက်ပြီးဒီဘက် ပြန်အလှည့် တီခိုင်က ကိုကြည့်မိတယ် တီခိုင် တစ်ကိုယ်လုံးစိုရွဲလို့ ထမီအနီရဲနဲ့ အပေါ်က အိမ်နေရင်း အဖြူ အင်္ကျီအပါးခါးတင်လေးဝတ်ထားတာ …ဘော်လီက နှစ်ကြိးဘော်လီအနက်နဲ့ ဖွေးဥနေတဲ့အသားရေပေါ်မှာ ဘောလီအနက်ကထင်းနေတာေ ရစိုနေတော့ အသားနဲ့ကပ်နေပြီး ကိုယ်လုံးက ထင်းနေတယ် တော်တော်လေးလှတယ်ဗျာ …မနက်က မပပဝတီ ကိုယ်လုံးလိုပဲ ဘာမှ ကိုမကွာတာ….တီခိုင်ကတောင်ဖင်တွေက ပိုမိုက်ဦးမယ် ကားထွက်နေတာ…ထမီအနီကရေစိုနေတော့အသားမှာကပ်ပြီး ပေါင်တံတွေကထင်းနေတယ် အောက်ခံဘောင်းဘီ မပါဘူး ဟိုဘက်လှည့်ချိုးတာဆိုတော့ ..အား ရပါး ရ ကြည့်နေမိတယ် ….ကြည့်နေ ရင်းဆံပင်တွေကိုဖြည်ချလိုက်ပြီးေ ရှ့ကို ကုန်းပြီး ဆံပင် ရှည်တွေကိုသပ်ချနေတာ နည်းနည်းလေးကုန်းတာမဟုတ်ဘူး တော်တော်လေးေ ရှ့ေ ရာက်တယ် ဖင်တွေက ဖု နေတာမဟုတ်ပဲ အိထွက်ပြီးကားတက်နေတာရေစိုတာတစ်ကြောင်းထမီက အပျော့ဖြစ်တာတစ်ကြောင်း ဟိတ် … ငစော် ခေါ်နေတာမကြားဘူးလား ဘာကြည့်နေတာလဲ အမ် ဟိုဘက်ကရေ ပို များလားလို့လှမ်းကြည့်နေတာ သြော် …. မိုး အ ရမ်းအားကောင်းတယ်လို့ ဒီလိုမျိုးမိုးေ ရချိုး ရတာသိပ်ကောင်းတယ် ဟုတ် တီခိုင် ဟုတ်တယ် တီခိုင်က ဘာမှသိပုံမပေါ်ပါ ကျနော်ဘက်လှည့်ပြီး လည်းပင်းတွေ ဆံပင်တွေကိုသပ်ချနေတယ်လက်နဲ့ လက်မျြှောက်လိုက်တိုင်း …အကျီခါးတိုက အပေါ်တက်သွား ရင် ဗိုက်သွားဖွေးဖွေး ကိုမြင်နေ ရတယ်
လှလိုက်တာဗျာ ကလေးအမေဆိုပေမယ့် တစ်ကယ် ကိုမိုက်တယ် ဗိုက် က ပူမနေပဲ ချပ်နေသလိုပဲ အချပ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဗိုက်ပူပူကြီးမဟုတ်တာတေ့သေချာတယ် …။ ခေါင်းလျှောက် ရည်ဗူးထဲက ခေါင်းလျှော် ရည်ကိုလက်ထည့်လိုက် ခေါင်းကိုပွတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ် … ဟိတ် ငစော် မင်းဆပ်ပြာတိုက်ချင် သွားယူလိုက်ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကျနော် ဆပ်ပြာယူလာပြီးဆပ်ပြာတိုက်နေတုန်း ငစော် လာစမ်း တီခိုင်ဆံပင်တွေ မှာ ထွေးနေလားကြည့်ပေးဦး ကျနော်လဲ အကြိုက်တွေ့သွားတယ် ဆံပင်တွေကို အသာဖြေပေး ရင်း နောက်ကျောဘက်ကနေ တီခိုင်က ဆံပင်ကိုမထားပြီး ဘေးက ကျောက်လက် ရမ်းအစွန်းလေးပေါ်မှာထိုင်တယ် ကျနော်က တီခိုင် …. နောက်ဘက်အပေါ်ကနေ ဆံပင်ဆံကျစ်ကျစ်ထားလို့ ခေါင်းလျှောက် ရည်နဲ့ကပ်နေတာကို ဖြေ ရင်း တီခိုင်နို့တွေကို အပေါ်စီကနေကြည့်နေမိတယ် …. အေ ရှ့ကို နည်းနည်လေးစိုက်ထားတော့ လည်ပင်းက ဟိုက်သလိုဖြစ်နေတာကိုး သိပ်လှတယ်နို့တွေဗျာ ဖွေးဥပြီး ဘောလီ အနက်ကြားထဲမှာ တဝက်ပဲနေတယ် ကျန်တာတွေက မြင်နေရတယ် ရပြီ ရပြီ ဖယ် ရေ နဲ့ ထိ ရင် ရှင်းလောက်ပါပြီး အသာလေးဖယ်ပေးလိုက်တယ် တီခိုင်က ကျောက်လက်ရမ်းအစွန်းက ထလိုက်တာ ကျနော်ကမဖယ်ရသေးတော့ တီခိုင်ဖင်ကြီးနဲ့ကျနော် ပေါင်နဲ့တိုက်မိရော …အိုး ….. လက်က ကျနော် လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်မဆွဲရင် ရှေ့အားပါတော့ ဒူးထောင်ကျမှာလေ ကျနော်လက် ကိုဆွဲလိုက်တော့ တီခိုင် ဗိုက်ကိုသွားထိပြန်ရော … တီခိုင်နည်းနည်းတော့ ရှက်သွားပုံပေါ်သည် ဘာမှတော့မပြော …. မိုးလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းတိတ်စပြူလာပြီ ..လုံးဝတော့မတိတ်သေး ငစော် တီခိုင်တော်တော့မယ် ရေချိုးခန်းသွားပြီးရေသစ်ချိုးတော့မယ် မင်းအရင်ချိုးမလား တီခိုင်အရင်ချိုးရမလား “တီခိုင်”အရင်ချိုးလိုက် သားဆပ်ပြာတိုက်လိုက်ဦးမယ် ဒါဆိုပြီးတာပဲ တီခိုင်းပြီးမှ မင်းချိုးတော့ … ဟုတ် “ တီခိုင် တီခိုင် က ဘေးဝရန်တာ ကနေထွက်ပြီး အခန်းကိုဖြတ်လျှောက်ပြီး ရေလဲထမီ ကိုယူပြီးရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားသည် ကျနော် က ဆပ်ပြာမတိုက်ပဲ တီခိုင် ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်ပြီဆိုမှ အသာလေး ဘေးဝရန်တာ ကနေထွက်ပြီရေချိုးခန်းဘက်အသာလေးကပ်လာပြီးရေချိုးခန်းနဲ့ကပ်လျှက်က အိမ်သာ ထဲ ဝင်လိုက်တယ်… အိမ်သာနဲ့ရေချိုးခန်း က ကပ်လျှပ် မျက်နှာကျပ်မှာ ဘာမှ မရှိဘူး ရှိတယ်ဆိုပေမယ် ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာ ကို မျက်နှာကျပ်က တစ်ပေလောက်ခွာပြီးတစ်ဆက်တည်း ကပ်ထားတာမျိုးအဲဒီတော့ ရေချိုးခန်း ထဲကိုအသာလေး ခေါင်းလျှိုပြီး ကြည့် ရင် ရှင်းနေအောင်မြင်ရတယ် ဝေးလည်းမဝေးဘူးအပေါ်ဆီးကဆိုတော့ ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် မီးဆိုင်းအဖြုရောင်ရယ် ကြွေပြားအပြာရောင် က ရေချိုးခန်း ထဲကို ပိုပြီး ရှင်းအောင်မြင်ရတယ် တီခိုင် က မသိ ရေပန်းဖွင့်ပြီး စောနကလို ဆံပင်ကိုသေချာလေး လျှော်တယ်ပြိးတော့ အပေါ်က
ပိုင်းချွတ်ပြီးဘော်လီကိုမချွတ်သေးဘူး ဘောလီအနက်နဲ့ ကျနော် လည်းချောင်းတွေတောင်ချောက်ကပ်လာတယ် ဖင်ကြိးတွေက အပေါ်စီးက ဆိုတော့ သိပ်မိုက်တယ်ဗျာ ရေစိုစိုနဲ့ နို့တွေက ဆပ်ပြာတိုက်လိုက်တိုင်း ဘော်လီကြားကနေ လှုပ်နေတာ ဟော မျက်နှာက ဒီဘက်လှည့်ပြီး ဘော်လီကိုချွတ်ပြီး တန်းပေါ်တင်လိုက်ပြီး နို့တွေကို သေချာလေးကိုင်ပြီး ပွတ်နေတယ် ဆပ်ပြာကိုယူလိုက် နို့ကိုတိုက်လိုက် အပေါ်အောက် ပွတ်လိုက် ဘေးတိုက်ပွတ်လိုက်နဲ့ နို့တွေက ဖွေးဥပြီး လှုပ်လှုပ်သွားတာ ထမီချွတ်လိုက်ပြီး ဘေးမှာပုံထားတယ် အတွင်းခံမပါတော့ အဖုတ်နေရာ မှာ အမွှေးနည်းနည်း ပါတယ် သေချာ အမွှေးကြွတ်ဆေးတွေဘာတွေသုံးထားပုံရတယ် အဖုတ်ကိုတော့သေချာမမြင်ရဘူး နို့တွေကိုအားရပါးရကြည့်လိုက် ကျနော် ညီလေးကိုဘယ်ဘက်လက်က ငါးဦးကော်မတီ တက်ပေးလိုက်ဆွပေးလိုက်တယ် … တီခိုင် …….အဖုတ်တွေကြားကိုသေချာလေးဆပ်ပြာတိုက် လိုက် နို့တွေကို တိုက်လိုက်နဲ့ နို့ကို ကိုင်ရင် ဖီးလ်များတက်နေသလားမသိဘူး မျက်နှာမမြင်ရတော့ ခန့်မှန်းမရဘူး … ရေပန်းကိုဖွင့်ပြီးရေချိုးတာကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ် ကျနော်လဲ အသာလေး အိမ်သာထဲကထွက် …ဘေးဝရန်တာ ပြန်သွားပီး ဆပ်ပြာတိုက်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ် ငစော် ငစော် ဗျာ တီခိုင် မင်းအခုထိမလဲသေးဘူးလား လဲတော့ အမေလာမလားစောင့်နေတာ မလာဘူး ..မင်းအမေ ဒီမိုးနဲ့မလာဘူးလဲမှဖြင့်လဲ ဟုတ် တီခိုင် တီခိုင်ယောင်္ကျားအင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုးကိအသာလေးလှမ်းယူပြီး လဲလိုက်တယ် တီခိုင်တို့အခန်းထဲမှာဆိုတော့ တီခိုင်က ထမီရင်လျှားနဲ့ သနပ်ခါးသွေးပြီးလိမ်းနေတယ် ငစော် မင်းဗိုက်ဆာ ရင် တစ်ခုခုစားပါလားကော်ဖီသောက်လိုက် ဟုတ် ကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့ စားလိုက်မယ် ““အေးအေး”” မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိတယ်သွားစားလိုက် ကော်ဖီဖျော်ပေးရမလား ရတယ်.. တီခိုင် သား ..ဘာသာသားဖျော်မယ်ုကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့စားပိး..ကော်ဖီလက်ကျန်ခွက်ကိုကိုင်ပြီး စီးကရက်ဘူးတွေ့တာနဲ့ ဆေးလိပ်ဖွားရင်း အေ ရှ့ဝရန်တာ ကနေ အောက်ကိုလှမ်းကြည့်နေလိုက်တယ် တီခိုင်က အိမ်နေရင်း2ကွားတား နဲ့ လက်ပြက်လည်ဟိုက်အစိမ်းပုတ်လေး နဲ့ ကျနော်ဘေးလာပြီး အောက်ကိုငေးနေတယ် မွှေးလိုက်တာဗျာတီခိုင် သနပ်ခါးတွေ ကောရှိသေးလား အမလေး ငစော်ရယ် ပါးပါးလိမ်းတာပါ နင်ကလဲ တီခိုင်ပါးပါးလေးကလဲ မွှေးကြိုင်နေတာပဲဘာလဲ …ဦးမြင့် လာရင် မွှေးသွားအောင်လား ဟ …ဟ ..ဟဟ မင်းဦးမြင့် က …ထမင်းစားရင်တောင် ဘာနဲ့စားမိသလဲဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ သိတာမဟုတ်ဘူး ..သူအလုပ်ပဲ အာရုံရှိတာ သနပ်ခါးလိမ်းတာလောက်တော့ တွေးတောင်တွေးမိပါ့မလားကွာ ဦးမြင့်ကလဲ နော် လောဘကြီးနေလိုက်တာ သမီးတွေလဲ အိမ်ထောင်ကျ နေပြီ တော်တော်များများ လည်းအောင်မြင် နေတာပဲကို ဘာလိုလောဘကြီးနေသလဲမသိဘူး မင်းဦးမြင့်လာမှသာမေးကြည့် “ငစော်” ရယ် တီခိုင်ဖြင့် အဘိုးကြီးယူထားမိသလိုဖြစ်နေတာပဲ ဆေးလိပ်ကို တောက်ထုတ်လိုက်ပြီး ခေါင်းတွေလေးလာသည် မျက်လုံးတွေက ပူလာသည် ဖျားများဖျားတော့မှာလား မသိတံခါးဖွင့်ပြီး အခန်းဘက်ကြည့်အမေလဲမရောက်သေး တီခိုင် ဟင် ..သား ကျနော် ကိုယ်တွေပူသလိုဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေက မျက်ရည်ပူလိုလိုကျချင်နေတယ် ဟင် မင်းတော့ အဲဒါ ဖျားချင်
သလိုဖြစ်တာပဲ ဆေးခန်းသွားမလား တီခိုင်လိုက်ခဲ့မယ် အာ…ဆေးခန်းမသွားချင်ဘူး ဒါဆို နေဦး မှန်းစမ်း ….ဟုတ်တယ် မင်း ကိုယ်နွေးနေပြီ …လှဲနေလိုက် … လာ ..လာ ..အခန်းထဲ က ကုတင်ပေါ် လှဲနေလိုက် ဆေးယူပြီးကော်ဖီဖျော်လာခဲ့လိုက်မယ် ““ကော်ဖီသောက်ထားတယ်”” သောက်ထားလဲ ဆေးနဲ့သောက်ဖို့ဖျော်လိုက်မယ် နည်းနည်းပဲပေါ့ တီခိုင်တို့အခန်းထဲက လင်မယားအိပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်တက်လှဲနေလိုက်တယ် 4. နာရီတောင်ခွဲတော့မယ် အမေ ကလဲမလာသေးဘူး ကော်ဖီနဲ့ခွက်နဲ့လက်ထဲတွင်ဆေးယူလာပြီး ကုတင်ပေါ်တင်ပါးလွှဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ပြိး ထ ထဆေးသောက်မယ် တီခိုင် ကော်ဖီခွက်ကို ကုတင်ဘေးက စားပွဲပေါ် လှမ်းတင်လိုက်တာ လည်ဟိုက်ဆိုတော့ အထဲမှာ ဘော်လီ လုံးးးးးးဝ မပါ လက်ပြက်အစိမ်းပုတ်လေးနဲ့2ကွားတားဆိုတော့ ထိုင်လိုက်လျှင် ပေါင်တံတွေတဝ က်လောက်ထိမြင်နေရ ပြန်ရော………. ဆံပင်တွေကို နောက်တွင်စုပြီး ကလစ်နဲ့ညှပ်ထားတာဆိုတော့ နဖူးက ထင်းပြီး တစ်ကယ်ကို လှနေတာ မပပတို့နဲ့ဆို ညီအစ်မလို့ ထင်လောက်တယ် တီခိုင်က လက်က ကျနော်နဖူးကိုစမ်းတယ် ဟား မင်းခဏလေးအတွင်းပိုပူလာတယ် “ငစော်”မင်းဆေးခန်းသွားလိုက်တာကောင်းမယ် လမ်းထိပ်က ဆရာဝန် နီးတယ် သွားမလား မင်းနဲ့လဲခင်ပါတယ် SPIDER MAN ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းလေ အာ မသွားချင်ပါဘူး တီခိုင် ရာ SPIDER MAN ဆိုတဲ့ဆေးခန်းက ဆရာဝန် က ဆေးပဲတမ်းထိုးမှာ ဆရာဝန် ပေါက်စ ဆိုတော့ အမြဲ ပဲ ထိုးနေချင်တာ ကောင်မလေးလာလဲ ထိုးတာပဲ ကောင်လေးလာလဲထိုးတာပဲ လာသမျှပက်ထိုးနေတာ ဗ် … ပြီးတော့ ဘယ်တစ်လုံး ညာတစ်လုံးထိုးတာ ဘယ်လောက်နာတယ်မှတ်လဲ ဆေးကိုနှစ်လုံး ထိုးရမှကျေနပ်တဲ့ လူ ဗ် … မင်းမလဲ ကွာ…. ဆေးထိုးတာ ကိုပဲ နာတယ်ဆိုရသေးတယ် ကဲ …ကဲ ဆေးသောက်လိုက် ““ထ ”” ဘိုင်အို ဂျက်ဆစ်တစ်လုံးနဲ့ လန်းဆန်း တစ်လုံးပါတယ် ယူသောက်လိုက်ပြီး ပြန်လှနေလိုက်တယ် အားးးးးး တီခိုင်တော်တော်လေးချမ်းလာတယ် ဗျာ တီခိုင်က တင်ပုလွှဲ ထိုင်နေရ င်းကနေ ကျနော်ကိုခွပြီး ဟိုဘက်ကျော်တက်လိုက်တယ် ကုတင်ဘယ်ဘက်မှာကျနော် လက်မောင်းဘေးမှား ဒူးထောင်ပြီး ငုံပြီး ကြောင်ကြည့်နေတယ် ဘာလုပ်ရ မှန်းမသိဘူးဆို့တဲ့ အထာမျိုး တီခိုင် အရှေ့ က ဥိးမြင့်လာတာလား မသိဘူး မဟုတ်ဘူး သား ကိုမြင့် ဒီနေ့ သဘောင်္ဆိပ်သွားမှာပြောတယ် နောက်ကျမှာ
မင်းအမေလဲ နောက်ကျမှာ စိန်တွေများလို့သွားကြည့်မယ်ပြောသွားတာ ဟုတ်လား … ဒါဆို ဒီမှာ အိပ်နေရ မယ့် ပုံပါလား တီခိုင်အားနာလို့ပါ တီခိုင် လုပ်စရာရှိတာလုပ်နော် ဘာ မှ မရှိပါဘူးကွယ် … အားပါတယ် မင်းကိုယ်တွေပုနေတယ် သား စကားသိပ်မပြောနဲ့အဖျားပိုတက်မယ် ပြောပြောဆိုဆို တီခိုင် က ရှေ့တိုးပြီးနည်းနည်းကုန်းလိုက်ကာ နဖူးလှမ်းစမ်းတယ် လည်ဟိုက်ဆိုတော့ နို့တွေကို ရှင်းနေအောင်မြင်နေရ တယ် လက်တွေက ကျနော်ခေါင်းကိုကိုင်ပြိးနားထင်တွေကိုသာသာလေးနှိပ်ပေးနေတယ် လည်ချေင်းတွေခြောက်လာပြီး အောက်က ပုဆိုးဆိုတော့ထောင်မက်လာတာ ဘောင်းဘီက မပါဆိုတော့ လက်နဲ့လဲထိန်းလို့မဖြစ် ပြသနာတော့ စပြီ နောက်လှည့်ကြည့်လို့ကတော့ မလွဲဧကန်မြင်သွားမှာ ပင် 2ကွားတားဆိုတော့ ပေါင်လုံးတွေက ထင်းနေအောင်မြင်နေရ ပြန်တော့ နို့တွေကလဲ ပါးစပ်နဲ့သိပ်မကွာ ……. ရ လားသား ဘယ်လိုနေလဲ ငစော် လည်ချောင်းတွေပါပူလာတယ် တီခိုင် အင်း ….ဟုတ်မယ်မင်းအအေးတော့ကောင်းကောင်းပက်ပြီ နာရီကြည့်တော့ ည 8 နာရီးထိုးနေပြီ …. ကဲသား တီခိုင် ခဏလေး ဘုရားရှိခိုးလိုက်ဦးမယ် နော် ဆယ်မိနစ်လောက်ပါပဲ တော်ကြာနောက်ကျသွားမစိုးလို့ အာ ..ရ တယ် တီခိုင်သား လှဲနေရ င်သက်သာပါတယ် တီခိုင်က ထပြီး ဘီဒိုဖွင့်ပြီးအဝတ်စားလဲဖို့လုပ်သည် မီး ပိတ်လိုက်ပြီး …သားဟိုဘက်ခဏလှည့်ပေး အဝတ်စားလဲ လဲမလို့ အိုကွယ် တော်ပါပြီ ရေ ချိုးခန်းထဲသွားလဲတော့မယ်.. တီခိုင်ကလဲဒါဆို သား အပြင်ထွက်ပေးမယ်ကဲ လဲ ….လဲ …. ကဲပါ လှဲနေစမ်းပါ ဆရာရ ယ် နေ နေ တီခိုင် မီးပိတ်လိုက်မယ် မင်းဟိုဘက်သာလှည်နေတော့ ပြောပြောဆိုဆိုတီခိုင်မီးလှမ်းပိတ်ပြီး ပထမဘောင်းဘီချွတ်လိုက်သည် ဘယ်လောက်မှောင်မှောင် ဘယ်လောက်ပိန်းပိန်း ငစော် တို့ က အားလုံးမြင်ရအောင်ကြည့်တက်တယ်..ခိခိခိ ဖင်တွေက ဖွေးပြီးကားထွက်နေသည် ထမီမဝတ်သေးပဲ အင်္ကျီအရင်ချွတ်လိုက်ပြီး လက်ရှည်တစ်ထည် ဝတ်သည် ပြီးမှ ထမီဝတ်သည် ပြီတော့ မီးပြန်ဖွင့်လိုက်ရာပြန်လှည့်ချိန်မရ လိုက် တီခိုင် က အကြည့် ကျနော်က ဟိုဘက်မလှည့်ပဲ ကြည့်နေတာကို တည့်တည့်တိုးသွားသည် ဟဲ့ ငစော် …မင်း ဟာ ဘာလို့ကြည့်တာလဲ ငရဲကြီးတော့မှာပဲကွာ…. ဟုတ်ဘူးတီခိုင် လှည့်မလို့ပဲ တီခိုင် လဲတာကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်လိုက်မိတာပါ ဘာစိတ်မှာမပါပါဘူး တော်တော် မင်း …. မျက်နှာမှာ ရဲတက်နေသည် အရှေ့ခန်းထဲထွက်သွားသံကြားသည် ခဏနေတော့ အသာလေးထကြည့်တော့ ဘုရားရှိခိုးပြီး
သွားပြီထင်တယ် ဒီဘက်လျှောက်လာတယ်ကျနော်လဲကုတင်ပေါ်ကဆင်း ပြီးအခန်းထဲကအထွက် တီခိုင်ကလဲ ဒီဘက်ကိုဖြတ်တဲ့အခိုက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မီးကဖျတ်ကနဲ့ပြက်သွားရောစာအုပ်တွေထဲကလိုများဖြစ်နေရာလား ပဲ ဟ ငစော် ဓတ်မီး ကုတင်ပေါ်ကခေါင်းဥိးအောက်မယ် ယူလိုက်ဥိး “မမြင်ရ ဘူးတီခိုင်” ကျနော် က အခန်းအပြန်ဘက်ရောက်နေပြိ ငါလဲဘာမှမမြင်ရ တော့ဘူး နေဦး မင်းအဲဒီနားရ ပ်နေ တီခိုင် လာယူမယ် ဓတ်မီးကိုဖည်းဖြည်းဖြည်းချင်း အခန်းဘက်လာတာမြင်ရ သားပဲဘာမှမမြင်ရ ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ် ဟဲ့ “ငစော်” နင်ဘယ်မှာလဲ တံခါးနားမှာ ရ ပ်နေရ ပ်နေ ရ ပ်နေတာပဲဘယ်မှမသွားဘူး တီခိုင်က ကျနော်နားအရောက် ကျနော်ကိုလျှောင်ပြီးအခန်းထဲဝင်ပြီး ဓတ်မီးအယူ ကျနော်လဲအခန်းထဲလှမ်းအဝင် တီခိုင် ဖင်နဲ့ ကျနော် နဲ့တိုက်မိတယ် အမေ့ … ဟာ တီခိုင် မမြင်ရ ဘူး တီခိုင်က ကုတင်ပေါ်လက်ထောက်လျှပ်သားဖြစ်သွားပြီးကျနော်က သူအနောက်ကနေ မထောက်မိယုံတစ်မယ်ပဲရှိတယ် လုပ်လိုက်ရ င် အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းပဲ မင်းကတော့ ရှာလို့မတွေ့ ဓတ်မီးက ဘယ်များထားမိပါလိမ့် မီးကလဲမလာ သေး မှောင်လိုက်တာမှ မဲ လို့ တီခိုင် ကျနော် တော်တော်လေး ခေါင်းတွေမူးလာပြီး ကဲ လာ လာ ။။။ ဒီဘက်ကနေလာ မင်းလက်ပေး လက်ကိုဆွဲပြီးကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ် သူက ခုနကလိုတင်ပါးလွှဲ ၀ င်ထိုက်လိုက်ပြီးနားထင်ကိုနှိပ်ပေးနေတယ် ကျနော်ကလဲ ထထိုင်လိုက်တော့ ဘာလို့ထိုင်တာလဲအိပ်နေလေ အိပ်လိုက် ရင် ပိုက်ကိုက်သလားလို့ တီခိုင်လက်ကိုခေါင်းပေါ်ကနေအသာလေးအုပ်ကိုင်လိုက်တယ် ဘာလို့လဲ နှိပ်တာနာလို့လား ဘာမှမဖြေပဲ ….. လက်နှစ်ဖက်လုံးကို ချုပ်လိုက်တယ် ငစော်မင်းဘာလုပ်မလို့လဲ…..လက်ချုပ်ထားတာတီခိုင်ကြောက်တယ်နော် ဘာမှမပြောပဲ လက်ကနေကိုင်ပြီးအတင်းဆွဲပြီး ဖက်လိုက်တယ် တီခိုင်နို့တွေက …ကျနော် ရင်ဘတ်နဲ့..လာထိတယ် အိနေတာပဲဗျာ ငစော် ။။။။ မလုပ်ပါနဲ့ ..မင်းင ရဲကြီးမယ်နော်။။ မင်း။။။။ မင်း။။။ ချစ်တယ်တီခိုင် ရာ မင်း မိုက် ရိုင်းတယ် မမ နဲ့တိုင်မယ် တိုင်ဗျာ တိုင် တိုင် ချစ်တယ်ဗျာ တီခိုင် မ ရုန်းနိုင်ပါ ကျနော်လက်တွေက တီခိုင် ကိုဆွဲလှဲလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ကနေခွလျှက်ချုပ်ထားပြီး တီခိုင်က ပက်လက်အနေအထားဖြစ်သွားကာ ရှုန်းအားမ ရှိတော့.ခုနက လက် ရှည်အင်္ကျီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဘောလီမပါတော့ နီု့တွေက ဖွေးနေတာပဲအမှောင်ထဲမှာ တောင်ဖွေးနေတယ် ……ကုန်းစို့လိုက်တယ် …မင်း ခွေး လိုကောင် … ချစ်လို့ပါတီခိုင် ရယ် ““လွတ်ပါ ”ကွာ နော် မင်း ..လွတ်လို့ .. …”လွှတ်ဘူး ”ချစ်ပြီးမှလွှတ်ပေးမယ် . .. ရှက်လိုက်တာကွာ..သေချင်တယ် …..လူကြားမကောင်းပါဘူးကွာ ငစော်လွှတ်ပါ မလွှတ်နိုင်ဘူး ..နိုတွေ့ကို တစ်ဖက်စို့ …တစ်ဖက်က ထမီကိုဆွဲချလိုက်ပြီးပေါင်ကြားကိုလက်ကလေးထည့်လိုက်တယ်….. ကိုဗမ် ပညာတွေ အခုမှလက်တွေသုံး ရမယ် စာတွေပဲ ရှိခဲ့တာ … နို့တွေကို ဘယ်ဘက်နို့ကို
ကုန်းကုန်းစို့လိုက် လျှာနဲ့ ရပ်လိုက် ………အင်းးးးးးးး….““လွှတ်လို့ ပြောနေတယ်”” တီခိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာဘာမှမ ရှိတော့ဘူး ….. ကျနော်လဲမြန်မြန်လေး ပုဆိုးချွတ်အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပြီးး. ပြန်ပြီး နို့ကိုကုန်းစို့လိုက်တယ်….ငစော် တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ် ….ငစော်မလုပ်ပါနဲ့ကွာနောနော် အသံလေးတွေပြောင်းလာပြီ …ပျော့လာပြီ .. ……..ချစ်တယ်တီခိုင် ရယ် ချစ်တယ်ဗျာ…… သွား သွား …မချစ်နဲ့ နို့တွေက တင်းပြီးမာနေတယ် ပျော့နေဘူးဗျ … ဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ဆင်းလာပြီး …. အဖုတ်လေးကိုနမ်းကြည့်တော့ မွေးနေတာပဲဗျာ ဆပ်ပြာနံလေး အသာလေးလျှာလေးနဲ့ ရပ်လိုက်တယ် ……အင်ဟင်း…….. မင်း ..မင်း …မလုပ်နဲ့ကွာ “ငစော်” မလုပ်နဲ့သာပြောတယ် အ ရည်တွေ စိုနေပြီ ပေါင်တွေ ဗိုက်တွေပက်ပက်လည်ပက်နမ်းလိုက်တယ် အားးးး …အဟင့် …အဟင့် သေသာသေချင်တော့တယ်မင်းနဲ့တော့ အပေါ်ဘက်တက်ပြီး နို့တွေကိုလီးနဲ့အတင်းထိုးလိုက်တယ် အေ ရှ့တိုးနောက်ဆုတ် တီခိုင်မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားတယ် …ပါးစပ်ကလဲ တဟင်းဟင်းနဲ့ ခုနကလိုလဲမ ရုန်းတော့ဘူး ……… ငြိမ်နေပြန်တယ် နို့ကိုစို့လိုက်…..နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းတော့ဟိုဘက်လှည့်သွားတယ်ဗျာာတီခိုင်ဒီဘက်လှည်ဗျာ ….. “လှည့် ဘူး““ ”လှည့်လို့ဆိုမလှည့်ဘူးကွာ” နေဗျာ … နို့ကိုအတင်းကုန်းစိုးလိုက်တယ် ဘယ်ကောညာကောလက်သမားတွေ ရွှဘော်ထိုးသလိုမျိုး အဲ လက်တွေက နောက်ကျော်ကိုကုတ်ထားတယ် နို့တွေမှာ တံတွေးတွေကို ရွဲလို့ ..ပလပ် ..အဟင့် ပလပ် အဟင့် အာ့း အာ ….အိုးးးးး အာ့ ……အောက်ဆင်းပြီး စပက်လေးကို အားရပါး ရ သံမဏိ လျှာနဲ့ အောက်ကနေအပေါ်ကို ပင့်ပြိးဆွဲထည့်လိုက်တယ် အာ့ …..အဟင့် ဟင့် …… တီခိုင် ..နှုတ်ခမ်းဒီဘက်လှည့်လို မလှည့်ဘူးကွာ……. ပြန်ဖြေတယ် ကျနော်လဲ လက်နဲ့ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး မျက်နှာကိုကျနော်ဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်တယ် ပြီး တော့ တီခိုင်းနှုတ်ခမ်းကို အတင်းဆွဲစုတ်လိုက်တယ် အွန့် ဟွန့် …. ဘယ် ရမလဲ ပါးစပ်တော့ပွင့်သွားပြီ …လျှာကိုအတင်းထိုးထည့်လိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို နို့ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ချေပေးလိုက်တယ် အာ့ ဟာ့ အင့် တီခိုင်လျှာတွေဘာတွေပါလာပြီ …. လက်တစ်ဖက်က နို့ကိုချေလိုက် လက်တစ်ဖက်က ပေါင်တွေကိုပွတ် ပါးစပ်က တီခိုင်း နှုတ်ခမ်းကိုဆွဲစုတ်ထားလိုက်တယ် အားးး အွန့် ဟွန့် အာ့ ငစော် …အို ““ငစော်”” လို့ ကျနော် အသာလေး လီးကိုကိုင်ပြိး တီခိုင် ခြေထောက်လေးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲလိုက်ပြီး လီးကိုတီခိုင် အဖုတ်လေးဘက်ကို လှည့်လိုက်တယ် …. တီခိုင် ….က…… ပေါင်ကိုတောင်အလိုက်သင့်ကားထားပေးတယ် ဗ်………. ““နေဦး ”” “ဖယ်ဦး ” ဖယ်ဦး”” တံခါးသွားပိတ်ဦးမယ် ကွာ မသှားရဘူးဗြာ လုံးးးးးးးဝ ပဲ …… “ငစော် ““ အရှေ့တံခါး က ဂျက်မချရသေးဘူး …….မမ ပြန်လာရင် ဒီဘက်ဝင်လာတက်
တယ် တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာမှာကြောက်တယ် … ဒါဆို မင်းသွား ..မင်းသွားပိတ်လိုက်….. သွား…သွား … တံခါင်း ..Lock ချလိုက်ဦး … တီခိုင် . ထမပြေးရဘူးနော် … “အင်း“ ကတိနော် ““ အင်း ..ပါဆို ““ကွာ မရဘူးသေချာပြောနော် …“အေးပါကတိကတိမပြေးဘူးဘယ်မှမသွားဘူးဒီကုတင်ပေါ်ကပဲစောင့်ပါမယ့် ”ကဲကျေနပ်ပြီလား ပြီးတာပဲ ဒါဆိုကျနော်ပြေးပိတ်လိုက်မယ် ““လူဆိုးလေး““ “ငစော် ““ “““မြန်မြန်ပိတ်ပြီးလာခဲ့ သွ တီခိုင်စောင့်နေမယ် .ငစော် မကောင်းဘူးထင်တယ်နော် အဒေါ်နဲ့တူ” “ကောင်းပါတယ်တီခိုင်ရယ် အခုနတုန်းကတောင် ကောင်းနေသေးတာ” “နင်တော်တော်ဆိုးတယ်နော် ခက်တော့တာပဲ” ကျနော်က အခု န အတိုင်းပဲ ကုတင်ပေါ် ပြန်တက်ပြီးတာနဲ့ တီခိုင့် ပေါင်နှစ်လုံးကြားဝင်ပြီး အရည်ရွဲနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ကုန်းရက်တော့တာပဲ၊ “အိုး ငစော်ရယ် ဘုန်းတွေ ဘာတွေ နိမ့်ကုန်ပါ့မယ်” ပြောတာ ပြောနေတာ တီခိုင့်လက်တွေက ကျနော့် ဆံပင်ကို ဆွဲဆုပ်လို့၊ တီခိုင်ဖင်ကြီးတွေ က ကြွကြွလာပြီး ကျနော့် ပါးစပ်နဲ့ သူ့ အဖုတ်မကွာရအောင်ကော့ကော့ပေးနေတယ်၊ ခနနေတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီး တောင့်တင်းသွားပြီး၊ ငြိမ်သွားတယ်၊ တချီပီး သွားတယ်ထင်တယ်၊ အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း တွားတွား ပြီး တီခိုင့် ကိုယ်ပေါ်မှောက်ရက် အိပ်လိုက်တယ်၊ ကျနော့် လီးကြီးက တီခိုင့် အဖုတ်ဝမှာ တေ့နေပြီ၊ အသာဖိထိုးလိုက်တယ်၊ “အင့် ငစော် ဖြည်ြ့းဖည်းကွာ….အာ” ကျနော် စကားမပြောနိူင်တော့ဘူး၊ တီခိုင့်ပေါင်လုံးကြီး နှစ်လုံးကို မြှောက် ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီး လိုးနေမိပြီ၊ “ဖွတ်ဖတ် စွတ်ဖတ်” “ အို့ ငစော်ရယ်၊ နင် ဘယ်က နေ အဲဒါတွေ တတ်နေရတာလဲ၊ အို့….ကျွတ်စ်..ရှီးးးးး” ကျနော် က စကားတောင် မပြောနိူင်တော့ပါဘူး၊ တီခိုင့်စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးနေရတာ အရသာရှိလွန်းလို့၊အသက်တောင် မရူနိုင်တော့ ပဲ အားရ ပါးရ ဆောင့်လိုးနေမိလို့ပါပဲ၊ ကိုယ့် အဒေါ် ရင်းကို ကိုယ် လိုးနေရတယ် ဆိုတဲ့ အသိကလည်း စိတ် ကို အရမ်း လှုပ်ရှားစေတာမို့ သိပ်အကြာကြီး မဆွဲနိုင်ပါဘူး၊ တီခိုင်ရော ကျနော်ရော၊ နှစ်ယောက်စလုံး၊ တပြိုင်ထဲ လိုလို ပြီးသွားရ ပါတော့တယ်။ ကျနော် က ပြီးသာ ပြီးသွားပေမဲ့ ကျနော့် လီးကြီးက အရမ်းမပျော့သွားသေး ပဲ ကျန်နေသေးလို့ ကျနော်က တီခိုင်ရဲ့ အဖုတ် ထဲ မှာပဲ မြုတ်ထားပြီး တီခိုင့် ကိုယ်လုံးကြီးကို လည်း တအားဖက်ထား ရင်း နားနေမိပါတော့တယ်။ “ငစော် နင် အတတ်ကောင်းတွေ တတ်နေတယ်နော်..ဟင့်..နောက်ပြီး ကိုယ့် အဒေါ်အရင်းတောင် မရှောင်တာ့ဘူး” “ဟင် တီခိုင်က လည်း ဘာဖစ်လို့လဲဗျ၊ အချစ်မှာ အဒေါ်တွေ တူတွေ မရှိပါဘူးဗျာ” “ဟဲ့ ဒါ ဘာအချစ်လဲ ၊ နာဗူး ကျတာကြီးကို ၊ ငါ့က ယောက်ကျားနဲ့ ခလေးနဲ့ မြေး တောင်ရတော့မယ်၊ အချစ်ဆိုတာ လူပျို အပျိုတွေ အတွက်” “ဒါပေမဲ့ တီခိုင်က နုတုန်း၊ တောင့်တုန်း လေဗျာ” ပြောရင်းနဲ့ စိတ်ပြန်ထ လာတော့ ကျနော့်လီးက တီခိုင်ရဲ့ အဖုတ်ထဲ မှာ ပြန်မာ လာခဲ့တယ်၊ တီခိုင်လည်း ချက်ချင်း ခံစားမိတယ် ထင်ပါတယ်၊ ကျနော့် လက်မောင်းကို မနာအောင် ဆွဲဆိပ်တယ်၊ “ဟယ် လာပြန်ပြီ ..ငစော် နင်လေ..ခက်
တော့တာပါပဲ” ကျနော်က မာလာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျနော့် လီးကို တီခိုင့် အဖုတ်က နေ တလက်မ လောက်ပဲ ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်ပြန် သွင်းပေးနေတယ်၊ တီခိုင်ရဲ့ အဖုတ်က လည်း အရည်တွေ စိမ့်လာပြီလေ၊ တီခိုင်လည်း စိတ်ပါလာပြီ ဆိုတာ ကျနော် က သိနေတော့ တီခိုင့် နူတ်ခမ်းလေး ကို ပါ သွားစုပ်လိုက်ပြီး ကစ်စ်ပေးလိုက်တယ်၊ တီခိုင်က လည်း ကျနော့်ကို ပြန်ဖက်ပြီး ပြန်နမ်းလာပါတယ်။ “တီခိုင် လေးဘက်ထောက် ပေးပါလား” “အိုကွာ ငစော်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လုပ်ပါကွာ..ငါရှက်လို့သေတော့မယ်” “တီခိုင်က လည်းအခု နက ဒီလိုကြီးပဲ လုပ်ပြီးပြီလေဗျာ၊ အခု တမျိုးလေး စမ်းရအောင်ပါ” “ငစော်ရယ်..နင်နဲ့တော့ ခက်နေတော့တာပဲ” တီခိုင်တယောက် ငြီးငြီး ငြူငြူ နဲ့ ပဲ သူ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို လိမ့်လိုက်ပြီး မှောက်လိုက်တယ် ပြီးမှ ဖင်ကြီးကို ကြွပေးပြီး တတောင်ကိုလည်း ထောက်လိုက်တယ်၊ တီခိုင့် ဖင်ကြီးက အယ်နေတာပဲ ၊ တောက်၊ သွားရည်တောင် ကျလာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော် အနောက်ကနေ ထည့်မရဘူး ဖြစ်နေတယ် ပုံစံ မမှန်သလိုပဲ၊ “တီခိုင်..ခါးကိုနိမ့် ပြီး ဖင်ကို ကော့ပေးလေ အဲဒီပုံ ဆိုရင် ကျနော် လုပ်လို့မရဘူး” “အိုကွာ မင်းက လည်း ရှုတ်လိုက်တာ မသိတော့ဘူး” တီခိုင်က ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခေါင်းအုန်းပေါ် မျက်နှာအပ်ပြီး မှောက်ချလိုက်တယ်၊ အဲတော့ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်သလို ဖြစ်သွားပြီး သူ့ ဖင်ကြီး နှစ်လုံးအောက်၊ ပေါင်ကြားက အရည်တွေ ရွဲနေတဲ့ အဖုတ်ကြီးက အနောက်ဘက်ကို ပြူးကနဲ ထွက်လာတယ်၊ အဲတော့ မှ ကျနော်က အားရ ဝမ်းသာ စွာနဲ့ ကျနော့် လီးကို တေ့ပြီး ဖိသွင်းချပစ်လိုက်တော့တယ်၊ “ဖွတ်..ဗြိ….စွတ်” “အ..အု… ဖြေးဖြေး ငစော်၊..အား..အောင့်သွားတာပဲ အထဲကို” “ဆောရီး..ဆောရီး..တီခိုင်၊ တီခိုင့် အဖုတ်ကြီးက ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ ထိုးချလိုက်မိတာ၊ အထဲ မှာလည်း အီစိမ့်နေတာပဲ” ကျနော်က ပြောပြောဆိုဆို နဲ့ ဆက်ဆောင့်နေတော့တာပေါ့ တဖွတ်ဖွတ်နဲ့၊ တီခိုင်တယောက်ကတော့ ရှက်တာနဲ့ ကောင်းတာနဲ့ ရောပြီး စကားဆက်မပြောနိုင်တော့ ပါဘူး၊ ခေါင်းအုန်းမှာပဲ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး တအီးအီး ငြီးနေပါတော့တယ်။ ကျနော်က တီခိုင့် ပေါင်လုံးကြီးတွေ ဆွဲဆွဲ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ၊ ကျနော့်ပေါင်ခြံနဲ့ တီခိုင့် တင်သားစိုင်ကြီးတွေ ရိုက်မိပြီး တုန်တုန် သွားတဲ့ တီခိုင့် ဖင်ကြီးတွေကြောင့် ဖီးတက် ပြီး သိပ် ကြာကြာ မခံလိုက်ပဲ သုတ်ရည်တွေ တပြွတ်ပြွတ်ပန်းထည့် လို့ တချီပြီးသွားခဲ့ ပြန်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီနေ့ က မိုးကလည်း ကောင်းကောင်း
နဲ့ တီခိုင့်ကို ၊ တီခိုင်နဲ့ ဦးမြင့်တို့ ရဲ့ လင်မယားကုတင် ကြီးပေါ်မှာ ၃ ချီတိတိ လိုးမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်နဲ့ တီခိုင်တို့ ရဲ့ တူဝရီး ဆက်ဆန်ရေးက လည်း တမျိုးပြောင်းလည်း သွားခဲ့ရ ပါတော့တယ်။ တီခိုင် အိမ်မှာ တီခိုင် တယောက်ထဲ ရှိနေတတ်တဲ့ အချိန်က များတော့ ကျနော်၊ က လစ်ရင်လစ်သလို တီခိုင့် အခန်းကို ပဲ သွားပြီး တီခိုင်တို့ လင်မယားကုတင် ကြီးမှာ သွားသွားလိုးပေးပါတယ်။ တီခိုင်ကလည်း အခု မှ ငတ်နေရတာတွေ အတိုးချ စားနေသလိုပါပဲ၊ ကျနော် တောင်းလိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ မငြင်းဘူး။ တခါတလေ အိမ်မှာ အမေ မရှိပဲ ကျနော်တယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာ တီခိုင်က ကျနော့် အခန်းထဲ ကို ဝင်လာ ပြီး တော့ ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လာလုပ်တာနဲ့ ကျနော်က ဆွဲ ပြီး လိုးပစ်လိုက်တာပါပဲ၊ သူ ကျနော့် အခန်းဝင်လာ ကတဲက ခံချင်လို့ လာမှန်း ကျနော်က သိနေပြီလေ။ တီခိုင်နဲ့ ကျနော်နဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက်က အရှက်တွေ ကုန်သွားကြပြီး ၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ကလည်း ဘယ်သူမှ သိလို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်တော့ ပိုပြီး စည်းလုံးကြပါတယ်။ နောက်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက်လဲ စိတ်ထဲ ရှိတာကို မကွယ်မဝှက် ပြောလို့ ရနေကြပြီလေ၊ တယောက်ကို တယောက် အထင်အမြင်သေးသွားမှာတို့ ဘာတို့ စိုးရိမ်ရမဲ့ အဆင့်မှ မဟုတ်တော့တာ။ “ငစော်နင် ငါ့ကို ဘယ်အချိန်လောက်ကထဲ က လိုးချင်တဲ့ စိတ်ပေါ်နေတာလဲ ပြောစမ်း” “အဟီး တီခိုင်ရယ်၊ ပြောရရင်တော့ ကျနော် ဂွင်းစ တိုက်တာ နဲ့ တီခိုင့်ကို စ မှန်းတာပဲ..တီခိုင်က ကျနော်နဲ့ ဒီလောက် အနီးကပ်နေတာ၊ ကျနော် လူပျို စဖြစ်ပြီး လီးတောင်တော့ မိန်းမ မြင်တိုင်း စိတ်ကူးယဉ်နေတာ၊ တကယ်တန်း ဂွင်းထုတဲ့ အချိန်ကျတော့ တီခိုင့် ဖင်ကြီးတွေ ပဲ မျက်စေ့ထဲ ပေါ်ပေါ်လာတော့ အဲဒီဖင်ကြီးတွေ နဲ့ ပဲ လရည်တွေ ထွက်ထွက်သွားရပေါင်း မနည်းတော့ဘူးပေါ့၊ ဟီးဟီး” “ဟင်း တော်တော် အတတ်ကောင်းတွေ တတ်နေ၊…နင်က မှန်းမဲ့မှန်း ဘာလို့ ပပ တို့ ဘုံဘုံ တို့ကို မမှန်းတာလဲ” “ မမှန်းပဲ နေပါ့မလား တီခိုင်ရယ် မှန်းတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့ က အဝေးမှာ နေတာလေ၊ တီခိုင်က အနီးကပ်” “ ဟဲ့ အနီးကပ် တိုင်း တောင့်တိုင်း နင် က မှန်းတာပဲလား နာဗူးလေး” “ ဟဲဟဲ တီခိုင်လို မျိုး တောင့်ရင်တော့ ဘယ်လွတ်လိမ့်မတုန်း ခစ်ခစ်” “ ‘ဒါဆိုရင် ငစော် နင် ငါ့အမ ကိုလည်း မှန်းမှာပဲ ထင်တယ်၊ ခစ်ခစ် သူက ငါ့ထက်တောင့်တာပဲ ဟာ၊ နောက်သူ့ယောက်ျား ကလည်း ဂျပန်မှာ အနေများတော့ သူလည်း ပြတ်နေတာ…ခစ်ခစ်” “ ဟာတီခိုင်ကလည်း” ကျနော် ပါးစပ်ပိတ်သွားရပါတော့တယ်။ ဘာပြောရမလဲ။ ပြီးပါပြီ။